2014 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Author: lubo601 | 12:49 PM | No မှတ်ချက် |
Mr. Bandy နှင့် အသက် အရွယ်ကြီးပြီ ဖြစ်သော ဦးလေးကြီးတို့
ဦးလေးကြီး ။ ။ Mr. Bandy က ဘာအလုပ်လုပ်သလဲ။
Mr. Bandy ။ ။ ဘဏ်မှာ Accountant လုပ်ပါတယ်။
ဦးလေးကြီး ။ ။ အမျိုးသမီးကရော။
Mr. Bandy ။ ။ သူ အလုပ်မလုပ်ပါဘူး ။ အိမ်အလုပ် တစ်ခုတည်းပဲ
Maung Karluu's photo.
Author: lubo601 | 12:48 PM | No မှတ်ချက် |
တစ်နေ့အသက် ၅၀ ခန့်ရှိ လူတစ်စု စည်းဝေးကာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရန် ကြံစည်ကြသည်။ အကြောင်းမှာ စည်ဘီယာ များ အပြည့်မထည့်ပေးခြင်း၊ အမြည်းများမှာ အရသာမရှိခြင်း၊ စင်တင်တွင် ထားရှိသော ပန်းကုံးများ အဆမတန် ဈေးတင်ထားခြင်း၊ ကံစမ်းမဲ ပေါက်နိုး ပေါက်နိုး နှင့် ၀ီစကီ ၀ယ်သောက်ရာ ကျေးဇူးတင်ပါသည် များနှင့်သာ တိုးနေခြင်း ကေတီဗီ တွင် ပိုင်သက်ကျော် နှင့် ဗညားဟန် သီချင်းများ အစုံအလင် မထားရှိခြင်း၊ မာဆက်သွားရာတွင် ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်သွားနေရခြင်းနှင့် မာဆက်တွင် မန်နေဂျာမှ အချိန်ခိုးခြင်း စသည့်အကြောင်းအရာများ ဖြစ်လေသည်။ ထိုသူတို့သည် စုရပ်အား ပန်းဆိုးတန်း ခုံးတံတား အောက်တွင်ထားရှိကာ သိမ်ကြီးဈေးအထိ လျှောက်လှမ်း၍ ဆန္ဒ ဖော်ထုတ်ကြရန် ရည်ရွယ်ထားကြ၏။ ချီတက်ရာ လမ်းတစ်လျှောက် ဘ၀တူ အရက်သမား များမှ သောင်းသောင်းဖြဖြအားပေးကြလေသည်။ ဆန္ဒ ပြသူများမှလည်း
" ပန်းကုံး ဈေးနှုန်း လျှော့ပေးရေး ဒို့အရေး ဒို့ အရေး"
" မာဆက်အချိန်များ မခိုးရေး ဒို့အရေး ဒို့အရေး"
" ဗညားဟန်သီချင်း ထားရှိရေး ဒို့အရေး ဒို့အရေး"
" သခင်မျိုးဟေ့ ဒို့ဗမာ"
" အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်"
Author: lubo601 | 12:48 PM | 1 Comment |
1000000 likes added6new photos.
ယနေ့ခေတ် အဖြစ်များနေသော ကင်ဆာဝေဒနာအတွက်
အထူးသဖြင့် သွေးကင်ဆာအတွက် ပါ။
ဆေးမန်ကျည်းကို စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ အရာတော်မြို့နယ် ၊
ကံသာရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာ တွေ့ခဲ့တာပါ။
ယခင်ဆရာတော်ကြီး စိုက်ခဲ့သော အပင်ဟုပြောပြပါသည်၊
Sunland Baobab လို့ အမည်ရတဲ့ သစ်ပင်ထဲက စားသောက်ဆိုင် ဟာ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း Limpopo ပြည်နယ်ရဲ့ Modjadjiskloof လို့ အမည်ရတဲ့ မြို့ငယ်ထဲမှာ ရှိပါတယ်။ သူက စားသောက်ဆိုင် ဆိုပေမယ့် ဘီယာဘား၊ အရက်ဘား ဆန်ဆန် ဆောက်ထားတဲ့ Bar တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
Khun Myo Nwe
1.Where there isawill, there isaway.
3.Beware of the dog.
4.Have you arranged your business satisfactorily?
မင်းရဲ့အလုပ်ကို မင်း ကျေနပ်လောက်အောင် စီစဉ်ပြီးပြီလား။
5.They will have to close down soon.
Business is so bad.
သူတို့ မကြာခင် လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းရလိမ့်မယ်။
ပြီးကောင်ပေါက်မလေးတစ်ယောက် သူ့ပေါင်ခြံမှာ ဆံပင်မွှေးတွေ ထွက်လာတာကိုထိတ်လန့်ပြီးသူ့အမေကို သွားပြောတယ်။
သမီး။ ။ မေမေ့ ဆံပင်မွှေးတွေ ထွက်လာတယ်
အမေ။ ။ မပူပါနဲ့ သမီးရယ် အဲ့ဒီ ဆံပင်ပေါက်လာတဲ့နေရာကို Monkey လို့ခေါ်တယ်
အဲ့ဒါ သမီးရဲ့ Moneky လေး အရွယ်ရောက်လို့ ဆံပင်ပေါက်လာတာလေ။
Khaing Myal Kyaw Kyaw
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက ဂျပန်ပြည်မှာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတခုရှိသတဲ့ ။
အဲ့ဒီဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာလည်း ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးပဲရှိသတဲ့ ။
တရက်တော့ အဲ့ဒီဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို သူခိုးတွေဝင်ပါလေရော ။
သူခိုးတွေကလည်း တော်တော်ဆိုးတဲ့ သူခိုးတွေပေါ့ကွယ် ။
တကျောင်းလုံးက ပစ္စည်းတွေသာမက ကျောင်းခေါင်မိုးကိုတောင် တခုခြင်း
ကားတွေဆီဖြည့်တဲ့အခါ အလကားပေးဝေတဲ့ ရေသန့် ဗူးတွေကို ကားမောင်းတဲ့သူတွက အလွယ်တကူ ကားအောက်ပိုင်း ကြမ်းပြင်မှာ အလွယ်တကူ ထားတတ်တဲ့အလေ့ထရှိတဲ့ သူတွေအတွက် သင်ခန်းစာယူပြီး သတိထားရမယ့် ဖြစ်ရပ်ပါ။
တစ်ခါက တက္ကသိုလ်တခုတွင် ကျောင်းဆင်းခါနီး ဆရာက ....
"ကစားနည်းတခု ကစားရအောင်..ဆရာနဲ့အတူ ဘယ်သူပါဦးမလဲ" ကျောင်းသူတဦး
ထရပ်ပြီး စတိတ်စင်ပေါ် တက်လိုက်သည်။
ဆရာက "သင်ပုန်းပေါ်မှာ ကိုယ့်နဲ့အရင်းနှီးဆုံး လူ(၂၀)ဦးရဲ့ နာမည်ကို ရေးလိုက်ပါ"
သူမက ဆရာပြောသည့်အတိုင်း အိမ်နီးချင်း၊ သူငယ်ချင်း၊ ဆွေမျိုးသားချင်း၊
မိသားစု နာမည်များကို ရေးချလိုက်သည်။
အခါတစ်ပါး၌ မြတ်စွာဘုရားသည် ရဟန်းတို့အား ဤစကားကို မိန့်ကြားတော်မူ၏။
ရဟန်းတို့ - အင်္ဂါလေးပါးနှင့်ပြည့်စုံသော စကားသည်
• ကောင်းစွာဆိုအပ်သော စကား မည်၏၊
• မကောင်းသဖြင့် ဆိုအပ်သော စကား မမည်။
1.It is of no use.
2.That is odd.
3.That will be nice.
4.That is not our fault.
We are perfect (ဖားfစ်ခ်ထ်).
အဲဒါ ကျွန်တော်တို့ အပြစ်မဟုတ်ဘူး။